UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica Uthumela uvelwano kuSapho lukaMelody Haughton-Adams
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica Uthumela uvelwano kuSapho lukaMelody Haughton-Adams
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett udlulisa uvelwano olunyanisekileyo kwizalamane nabahlobo baka-Melody Haughton-Adams, uMongameli we-All-Island Craft Traders and Producers Association, osweleke kwangoko namhlanje emva kokugula.
U-Haughton ube nguMongameli we-All-Island Craft Traders and Producers Association iminyaka engaphezu kwamashumi amabini.
Usebenze njengoMongameli weMarike yeSitrato yezoBugcisa eMontego amashumi eminyaka.
UMelody ebenomdla wokuphuhlisa ishishini lobugcisa kwaye ubengumntu obalulekileyo kushishino lokhenketho kwiminyaka edlulileyo.
“UMelody ubengumntu obalulekileyo kwishishini lezokhenketho kule minyaka idlulileyo kwaye ebesoloko ekuthanda kakhulu ukuphuhlisa ishishini lemisebenzi yezandla. Wayengumntu obalaseleyo noya kukhunjulwa ngokwenene ngabo bonke ababenelungelo elaneleyo lokumazi. Egameni le Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho kunye nawo onke amaqumrhu oluntu, ke ngoko, ndivakalisa uvelwano lwam kusapho nezihlobo zakhe ngeli xesha linzima,” utshilo uMphathiswa uBartlett.
U-Haughton ube nguMongameli we-All-Island Craft Traders and Producers Association iminyaka engaphezu kwamashumi amabini kwaye wakhonza njengoMongameli we-Harbour Street Craft Market e-Montego Bay amashumi eminyaka.
“Uthando lukaMelody kwishishini lemisebenzi yezandla, kunye nokhenketho olwandisiweyo, alunakuthelekiswa nyani kwaye ishishini lethu ngeke kufane ngaphandle kwakhe. Wanga umphefumlo wakhe unganoxolo noBawo wethu waseZulwini,” watsho uMphathiswa uBartlett.